रोग सर्छ भन्दै घर र माइतीले दिएनन् १ महिने सुत्केरीलाई आश्रय – Ktm Dainik
रोग सर्छ भन्दै घर र माइतीले दिएनन् १ महिने सुत्केरीलाई आश्रय - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
रोग सर्छ भन्दै घर र माइतीले दिएनन् १ महिने सुत्केरीलाई आश्रय
बुटवल- स’मस्या परेका बेला आश्रय दिने र जोगाउने को होला ? धेरैलाई लाग्न सक्छ, घरपरिवार र माइती । त्यसपछि आफन्त वा इष्टमित्र । तर कोरोना सन्त्रासका कारण भारतबाट आएकी रूपन्देहीकी एक सुत्केरीलाई आश्रय दिने कोही भेटिएनन् । यसले गर्दा उनी स्वदेशमै अ’लपत्र परेकी छन् । उनी जहाँ–जहाँ पुगिन्, को’रोना सर्ने ड’रले त्यहाँ–त्यहाँका ढोका बन्द गरिए । कोरो’ना छैन भन्ने पुष्टि हुँदा पनि कसैले विश्वास गरेनन् ।
घर, माइती र आफन्तले आश्रय नदिएपछि तिलोत्तमा मंगलापुरकी लक्ष्मी दर्जी अ’लपत्र परेकी हुन् । भारतको दिल्लीस्थित गाजियावादमा ३३ दिनअघि सुत्केरी भएकी लक्ष्मी अहिले चिचिलो शिशु, २ र ३ वर्षे छोरीसहित कहाँ बस्ने पिरलोमा छन् । के खाने, के लगाउने सं’कटमा छन् ।
भारतको दिल्लीस्थित गाजियावादमा ३३ दिनअघि सु’त्केरी भएकी लक्ष्मी अहिले चिचिलो शिशु, २ र ३ वर्षे छोरीसहित कहाँ बस्ने पिरलो
“आफ्नै देश, घर र माइतीमा पनि बास नपाइँदो रहेछ,” उनी दु’खेसो पोख्छिन्, “सबैले छि’छि र दू’रदूर भनेर भगाए ।” कतै आश्रय नपाएपछि उनी एक रात सडकमै बसिन् । अर्को दिनदेखि क्वारेन्टाइनमा चिनजान भएका साथी दीपक क्षत्रीले आफ्नो घरबाहिर ओसारी बारेर बस्न दिएका छन् । तर कति दिन उनले ओसारीमा बस्न दिने हुन् । त्यसपछि कहाँ जाने ? उनी आफैँलाई थाहा छैन ।
लक्ष्मी घरभेटीले आश्रय नदिएपछि सु’त्केरी भएको ५ दिनमै गाजियावादबाट हिँडेकी थिइन् । उनी २ दिन पैदलै हिँडिन् । त्यसपछि डेढ दिन बस यात्रा गरिन् । २ दिन भारतीय बजार सुनौलीको सडकपेटीमा पल्टिइन् । एक दिन नेपाली सीमा क्षेत्र बेलहिया नाकामा बित्यो । भोको पेट र चिचिलो शिशु छोरालाई दूध चुसाउँदा उनी छिनछिनमा बे’होस हुन्थिन् ।
घर जाने, पोषिला कुरा खाएर दूध निकाल्ने र छोराको पेट भरिदिने कल्पना गरेकी थिइन् । तर जब क्वारेन्टाइनबाट निस्केर उनीहरू घर गए, घरपरिवारले ढोकै बन्द गरिदिए
नाजुक अवस्था देखेपछि १० दिने सु’त्केरीको २४ दिनअघि रूपन्देही प्रशासन र तिलोत्तमा नगरपालिकाले लक्ष्मीलाई उद्धार गरेका थिए । उद्धारपछि उनी १४ दिन तिलोत्तमा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा बसिन् ।
शंकरनगरस्थित दुर्गादत्त माविमा उनलाई ठीकै थियो । पेटभरि रुखोसुखो खान र ओत लागेर सुत्न पाएकी थिइन् । त्यसपछि घर जाने, पोषिला कुरा खाएर दू’ध निकाल्ने र छोराको पेट भरिदिने कल्पना गरेकी थिइन् । तर जब क्वारेन्टाइनबाट निस्केर उनीहरू घर गए, घरपरिवारले ढोकै बन्द गरिदिए ।
सासूससुरासहितको संयुक्त घरमा सुत्के’री लक्ष्मी र उनको परिवारले बास पाएन । काखमा र काँधमा बच्चा च्या’पेर जब श्रीमान् मनोज र लक्ष्मी आँगनमा पुगेका थिए, घरपरिवार उनीहरूमाथि नै खनिए । “रोग लाग्छ । यहाँ बस्न दिन्नम् । गइहाल भनेर ह’कार्नुभयो,” लक्ष्मी सुनाउँछिन्, “रो’ग छैन । बास दिनुस् भनेर लाख बिन्ती गर्दा पनि सुनेनन् ।”
क्वारेन्टाइनमा उनीहरूको आरडीटी (र्‍यापिड) टेस्ट भएको थियो । त्यसपछि को’रोना छैन भन्ने पुष्टिसहितको कागज पाएका थिए । उनीहरूले उक्त कागज देखाए पनि घरपरिवारको मन पग्लिएन ।
१० महिना कोखमा राखेर जन्म दिएकी आमाले पनि दया देखाइनन् । आँगनमा उनी पुग्नासाथ माइतीहरू पनि खनिए । बाबुले हामीलाई तिमीहरूका कारण म’र्नु छैन भनेर झपारे
“कागजमा को’रोना छैन भनेर हुन्छ ? शरीरको कुरा कसलाई थाहा हुन्छ भनेर झर्किए”, लक्ष्मी सुकसुकाइन् । घरमा बास नपाएपछि उनीहरूले ओतका लागि छिमेकीलाई एउटा कोठा वा गोठ दिन आग्रह गरे । उनीहरू पनि बास दिन तयार भएनन् ।
बास नपाउँदा हैरान भएको लक्ष्मीको परिवार त्यसपछि करिब एक घन्टा टाढा माइती घर गए । कान्छीबजार छेउको इँटाभट्टीमा उनको माइती छ, जहाँ उनका बाबुआमा र भाइबुहारीको परिवार बस्छ । लाग्यो, माइतीमा त बास पाइन्छ । तर त्यही माइती घर पनि उनका लागि बिरानो भइदियो ।
१० महिना कोखमा राखेर जन्म दिएकी आमाले पनि दया देखाइनन् । आँगनमा उनी पुग्नासाथ माइतीहरू पनि खनिए । बाबुले हामीलाई तिमीहरूका कारण म’र्नु छैन भनेर झपारे । आमाले यस्तो बेलामा किन आएको ? जाऊ–जाऊ भनेर द’बाब दिइन् । त्यसपछि कहाँ जाने, के गर्ने । त्यस दिनको रात सडकमै बित्यो । चिचिला छोराछोरी भोकाएर रुन थाले । अर्को दिन ९ नम्बर नजिक जुटपानी टोलका दीपक क्षत्रीको घर गए, जुन पञ्जाबबाट लकडाउन सुरु भएपछि फर्केका थिए । यही कारण तिलोत्तमास्थित क्वारेन्टाइनमा बस्दा भेटिएका थिए । त्यही चिनजानका आधारमा घर पछ्याउँदै गए ।
त्यहाँ भने दीपक भगवानका रूपमा उदाए । उनले सहर्ष आँगनमा बास दिए । एक छाक खान दिए । लक्ष्मीको दुखेसो सुनेपछि दीपककी आमा ६५ वर्षीया भगवती रोकाय क्षत्रीको पनि मन पग्लियो । तर एक कोठाको घर । कहाँ बस्न दिनू ! टिनले छाएको ओसारी बोराले बारेर आपद् पर्दासम्म त्यही बस्न दिए ।
लक्ष्मीलाई आफ्नै आमाबाबुले आपद्का बेला गरेको गा’ली वि’षजस्तै लागेको छ । घर र माइतीका वचनले मुटुमा चो’ट लागेको छ
तिनै दीपकले तिलोत्तमा नगरपालिकालाई लक्ष्मीको परिवार अलपत्र परेको खबर गरिदिए । नगरपालिकाले एक सेट बिछ्यौना, २५ किलो चामल, ५ किलो दाल, २ लिटर तेल, २ पोका नुन र ४ पोका सोयाबिन लगिदियो । तर लक्ष्मीका लागि त्यही खाना पकाउने भाँडा भएनन् । नगरपालिकाका स्वास्थ्य अहेव अधिकृत गणेश गौतमले आफ्नो घरबाट पकाउने र खाने केही भाँडा जोहो गरिदिए ।
सु’त्केरी लक्ष्मीको परिवार अहिले त्यही खाँदै छ । तर उनीहरूका लागि फेर्ने लुगा छैन । एउटा पातलो बिछ्यौना, त्यसमा पनि ५ जना अटिँदैन । ३ छोराछोरी ओछ्यानमा सुत्छन् । सु’त्केरी र उनका पति छेउ बसेर रात क’टाएका छन् ।
“यस्तो आपद् कसैलाई नपरोस् । आफन्तको बीचमा बेसहारा हुँदा मन रुँदो रहेछ,” लक्ष्मी गुना’सो पोख्छिन्, “कहिले लकडाउन खुल्ला र मुग्लानतिरै जान पाए हुन्थ्यो भन्ने भएको छ ।” लक्ष्मीलाई आफ्नै आमाबाबुले आपद्का बेला गरेको गा’ली वि’षजस्तै लागेको छ । घर र माइतीका वचनले मुटुमा चो’ट लागेको छ ।
“शरीर कमजोर छ । कमजोरी त खाना खाए ठीक होला,” लक्ष्मी भन्छिन्, “तर मनमा लागेको चोट जीवनभर मेटिने छैन ।”
सुत्केरीको बिजोग भएको खबर पाएपछि तिलोत्तमा नगरपालिका उपप्रमुख जगेश्वरी चौधरी लक्ष्मीको अवस्था बुझ्न गइन् । उनले आफन्त र घरपरिवारबाटै अल’पत्र परेकी सुत्केरीको कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेबारे नगरपालिकामा छलफल गर्ने बताउँछिन् । “निकै बिजोग भएछ । नगरपालिकाकै अगुवाइमा भएपछि संरक्षण गर्नुपर्नेछ,” उनी भन्छिन् ।
अमृता अनमोल/नेपाल साप्ताहिक
कैलाली र रूपन्देहीबाट जबरजस्ती करणी आरोपमा २ जना पक्राउ